Turkiga oo Dabagal Ku Haya Gaari madow Oo Lagu Qaaday Jidhkii Kamal Khashuuji. | SAHAN ONLINE
ANKARA-Madaxda Turkigu waxa ay eegayaan kaamarooyinka waddooyinka, iyagoo baaraya gaari madow kaas oo ay aaminsanyihiin in jidhka Kamaal Khahufji uu ka qaaday Qunsilayda Istabuul isbuucii la soo dhaafay.- mid ka mid ah lixdii gaawaarida ciidamada sida gaarka ah u tabaran ee ay lahaayeen, kuwaas oo looga shakisanyahy in ay ka danbeeyeen dilka ama khaarijinta suxifigii mucaaradka ahaa Jamal Khashuuji.
Madaxdu waxa ay sheegeen in gawaaridani ka tageen Qunsiliyadda Sacduudiga ee Istanbuul laba saac ka bacdi markii Kamaal Khashuuji uu u galay gudaha, sawirada kaamarooyinka ayaa muujinaya in sanduukhyo lagu raray gawaari, kuwaas oo watay taarikada diblomaasiyiinta. Kagadaal markii uu ka tageen Qunsiliyadda, laba gaari ayaa u leexday bidixda wadada wayn, halka saddexdii soo harayna ay u leexdeen midig. Baarayaashu waxa ay sheegeen mid kamid ah gawaarida oo daaqadihiisu madoobaayeen uu noqday midka diirada lagu saarayo baaritaanka, waxaana si dhow loo dabagalay waddooyinkii u dhowaa.
Ugu yaraan Isbuuc illaa markii la waayay Kamal Khashuuji, Rajib Dayyib Ordagan waxa uu ugu baaqayay Riyaad in ay sharaxaad ka baxiso waxa ku dhacay ninkii mucaaradka sare ku ahaa Sacuudiga, Jamal Khashuuji. Wararkan tafaashiisha ah ee la xiriira kolonyada gawaarida ah waxaa lagu sheegay Joornaal maalinle ah oo dowladda taageersan oo la yiraahdo Sabah.
“Waa in aan sida ugu dhakhsaha badan natiijo ka helnaa baaritaankan”. Ordagaan ayaa saas yiri isagoo jooga Bidapest. “Madaxda Qunsiliyada kuma badbaadi karaan oo kaliya in ay dhahaan waa uu naga tagay”.
Waxa uu sheegay in uu si shakhsiyan ah uu ula socdo arinta, laakiin uusan hayn wax caddaymo ah oo uu miiska soo saari karo hadda.
Madaxda sar-sare ee Ankara waxa ay weli ku qanancsanyihiin in ay dileen ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee loo soo diray Istanbuul si ay u qafaashaan amase u dilaan Khashuuji. Kuwaas oo saf ugu jiray, sugaayayna markii galabnimadii Talaadada ahayd uu soo gaaray Qunsuliyadda. Waxa ay ahayd booqashadii labaad ee Kashooji ku tago Qunsiliyadda si uu u soo afmeero waraaqaha caddaynayay in uu soo furay reerkiisii hore , markii jimcihii la soo dhaafay loo sheegay in waraaqihiisu weli aysan diyaar ahayn. Islaanta udoonanayna Khadiija ay iyana ku sugaysay bannaanka Qunsiliyadda.
Duulimaadyada diiwaan gashan waxa ay sheegayeen in labo duulimaad soo gaareen maalinkii Talaada gegida Istanbuul ee Ataturk, ayna islamaalintaas ka duuleen waqti kala duwan, saacado kadib markii Khashooji la arko oo u danbaysay.
Madaxda Sacuudigu waxa ay weli ku adkaysanayaan in aysan wax door ah ku lahayn waayitaanka Khashooji. Laakiin waxa ay qirteen in maalintii Sabtida ahayd u direen Istanbuul wafti xagga ammaanka ah, balse wax sabab ah aysan raacsiin safarkaas.
Turkidu waxa ay carabaabeen waayitaanka Khashooji ay ka heleen waxbadan oo ka badan inta ay hadda shaaciyeen, sidaas awgeedna ay weli xeerinayaan wax badan oo kala dhaxeeya Sacuudiga, iyagana ay tahay in ay xaqiiqdu sheegaan ka hor inta aan baaritaanka la soo afmeerin.
W/Turjumay: Maxamed Cabdullaahi